Dhacdo naxdinleh: Hooyo ilmaheeda laga waayay isbitaalkii ay ku umushay Muqdisho iyo sida wax u dhaceen - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dhacdo naxdinleh: Hooyo ilmaheeda laga waayay isbitaalkii ay ku umushay Muqdisho iyo sida wax u dhaceen
Wararka aan ka helayno isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee loo yaqaan Sos ee magaalads Muqdisjo ayaa aabo aad u murugaysan ka hadley ilmahooda oo laga xaday isbitaalkaas. Hooyada ayaa ilmaha dhashay Khamiista ina soo dhaaftey, waxana ilmaha la xaday oo la waayay Jimcihii shalay ahaa.
Aabaha dhalay ilmaha oo lagu magacaabo Mustaf ayas uga waramay saxaafada sida wax u dhaceen. Mustaf ayaa sheegay in Hooyada dhashay ilmaha yar oo lagu magacaabo Naciimo Maxamed ay yara seexatay, dumarkii la joogayna ay aadeen Salaadii Maqribka shalay, sidaasina ilmaha looga xaday.
Aabe Mustaf ayaa sheegay isaga oo jooga gurigiisa in loo soo diray taleefoon, kadibna loo sheegay ilmihii yaraa ee uu dhalay in la waayay oo Isbitaalka lagu dhex xaday.
Waxa uu intaa raaciyay in markiiba uu soo cararay oo Isbitaalka uu yimid, balse uu garan waayay meel uu arrin ka bilaabo, dhaqaatiirta Isbitaalkana ay u jawaabi waayeen, maadaama shaqooyinkooda gaarka ah ku mashquulsanaayeen.
“Markii aan Xaafadda tagay oo cashada aan soo qaadi rabay, ayaa la isoo wacay waxaa la ii sheegay wiilkii in la qaatay waan soo cararay, Isbitaalka ayaan imid wax ku fiirinaayo & wax kuu jawaabaayo malahan.
Waxa taas ka sii daran meelaha qaarna inaad gasho lama ogala oo waxaan is weydiiyay hadaan meelaha qaar la ii ogolryn see ilmaha lagu xaday, qolka dad badan ayaa joogay, laakiin gabar yar ayaa qolka dhex joogtay oo agteena joogtay dadkana waxa ay u maleynayeen inay anaga nala joogtay.
Mustaf ayaa si diciifa u sheegay in wax rajo ah lahayn waa qadar Alle, balse waxaan la yaabanahay dayaca Isbitaalka ku jira ee ilmo yar irida loogala baxay, wuxuu ahaa cunugii noogu horeeyay.” Ayuu yiri Aabe Mustaf.
Tan ugu naxdinta badan ayaa ah fowdada ka jirta isbitaalkaas inaan la ogaan karin cida la baxdey.